"cười ra nước mắt" nghề sáng tạo | Anybook.vn - Anybook
“cười ra nước mắt” nghề sáng tạo | Anybook.vn
1 Ny fanaovana namana amin’ny sary manao fitiavana amin’ny teny dia boky momba ny hafaliana sy ny alahelon’ny mpanoratra kopia, mpanao dokambarotra na voasokajy ho asa famoronana.
1.1 Dokam-barotra- Ny asan’ny hevitra sy tsiky
1.1.1 Tantara #1: hevitra
1.1.2 Tantara #2: Resadresaka
1.1.3 Tantara #3: Fepetra ho an’ny mpanoratra kopia
1.2 Dokam-barotra – copywriting, fa tsy fanoratana votoaty
1.2.1 Inona no maha samy hafa ny copywriting sy ny fanoratana, tompoko?
1.2.2 Inona no torohevitra omenao ho an’ireo tanora te hanandrana ny tanany amin’ny dokam-barotra?
1.2.3 Voamarikao ve fa misy zavatra itovizana ny dokam-barotra sy ny pôrnôgrafia?
1.3 Fisaraham-bazana tsy mitombina amin’ny asa fanaovana dokambarotra
Ny fanaovana namana amin’ny sary manao fitiavana amin’ny teny dia boky momba ny hafaliana sy ny alahelon’ny mpanoratra kopia, mpanao dokambarotra na voasokajy ho asa famoronana.
Raha miditra amin’ny tontolon’ny Marketing ianao dia mety ho fantatrao fa misy boky manokana tsy maintsy vakianao ao amin’ny bokinao momba ny asa fanaovana dokambarotra, toy ny: Gobble, brood, Anay ity hevitra ity, Ny iray manohitra ny iray dia telo, Fiainana dokam-barotra, Effet decoy….
Ary raha manontany tena ianao amin’ny fisafidianana asa famoronana mpanoratra mpanoratra-doka miaraka amin’ny asa hafa amin’io tontolon’ny varotra midadasika io, ny boky Manaova namana amin’ny sary manao fitiavana amin’ny taratasy an’ny mpanoratra Pensil no ho fanalahidy hamaliana io fanontaniana io amin’ny fomba feno indrindra.
Dokam-barotra- Ny asan’ny hevitra sy tsiky
Tantara #1: hevitra
Azafady, tanisao ireo tantara mampihomehy voalaza ao amin’ny boky mba hahafantaranao ny hevitra tsara momba ny dokam-barotra.
…Taorian’ny fiofanana mafy dia nanao ny sidina voalohany ilay zaza moka. Rehefa nody izy, dia nanontany ny rainy hoe: “Manao ahoana ianao, anaka? Tsy mahafinaritra ve izao tontolo izao?” Namaly tamim-pifaliana ny moka hoe: “Tena tsara izany ry Dada. N’aiza n’aiza manidina, dia mitehaka amin-kafanam-po ny rehetra!”
Copywriting dia asa izay mametraka ny teny hoe kopia alohan’ny teny hoe mpanoratra. Rehefa tsy mahay ianao dia manoratra tsara fa tsy manoratra tsara, mandika ny hevitry ny hafa dia mamolavola azy, fa rehefa manana “elatra feno” ianao dia tsy maintsy mamorona ny hevitrao. Amin’ny fomba tena “professionnel” dia manaova adala amin’ny fombanao!
ARY IZAY MITADY VOALOHANY, NY HEVITRAO dia ho potipotika tsy misy indrafo.
Azo lazaina fa ny hevitra no fepetra takiana voalohany tsy maintsy ananan’ny mpanoratra kopia, tsy maintsy ampy izany poizina SY tsara tarehy mitam-piadiana toy ny fiarovan-doha alohan’ny hatsipy any anaty fako.
Raha resaka hevitra dia tsy mora na dia ny fanadinadinana ho an’ny toeran’ny mpanoratra kopia aza
Tantara #2: Resadresaka
Ity dia iray amin’ireo teny nalaina ankafizinao nalaina tao amin’ny boky ho anao izay manana fahafahana hanolotra ny tenanao amin’ny mpampiasa.
“Toa rehefa tena matotra ny olona amin’ny taonany sy ny herim-po ary ny talenta, dia matoky tena izy ka manetry tena.
Taorian’ny nandefasana ny filazana momba ny fandraisana mpiasa mpanao kopia miaraka amin’ny fepetra takian’ny fisainana mamorona, mahay miteny vietnamiana, fahatakarana ny literatiora sy ny zavakanto…, izay “tsy maintsy mahita izay tsy hitan’ny hafa” no takiana. maika.
READ + 699 Ảnh Hoàng Hôn Cực Đẹp Và Lãng Mạn - Đề án 2020 | Anybook.vn
Amin’ireo teny feno voninkazo an-jatony, ny tena misongadina dia ny mombamomba amin’ny litera mainty sy fotsy, fahamaotinana sy fahatsorana. Andalana iray ihany ny lahatsoratra tsy misy sary hafa.
“Tsy misy afa-tsy fepetra tsy maintsy atao araka ny voalazanao”
Nahazo isa avy hatrany ny fahasamihafana, ary ny mpanoratra dia manasa manokana ny talen’ny famoronana hanao tafatafa.
– Tena talanjona izahay tamin’ny mombamomba anao
-Manana traikefa amin’ny dokam-barotra ve ianao?
– Kely koa
– Afaka manome ohatra ve ianao?
-Ambarako ny asako ankehitriny
-Inona ny asanao ankehitriny?
-Tsy mampaninona anao ve ny mampiseho ahy ny tananao havia?
–Jereo rofia, maminavina ny anjara!
Mazava ho azy fa tantara mampihomehy fotsiny ity, mazava ho azy fa ilay lehilahy mpanandro dia afaka mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin’ny “fahaiza-mijery izay tsy hitan’ny olon-kafa” araka ny nofaritan’ny mpikarama. Saingy mazava ho azy, amin’izao fotoana izao, ny mpamaky dia afaka mihomehy tsara alohan’ny hirosoana amin’ny traikefa mpampiasa matotra kokoa.
Aza adino: Ao anatin’ny tontolon’ny dokam-barotra mamorona, tena ilaina ny fihomehezana!
Tantara #3: Fepetra ho an’ny mpanoratra kopia
(Loharano sary an-tsary: ​​Pejy mpankafy an’i Manaova namana miaraka amin’ny sarin’ny fitiavana amin’ny teny)
“Fony izahay mpiara-miombon’antoka, hoy ny talen’ny famoronana, dia noho ny antony iray ihany no nifidianana ahy tamin’io andro io: nahatsikaritra izy fa ny fitiavako ho lasa mpanoratra kopia dia tsy vitan’ny hoe namirapiratra teo amin’ny masoko, fa teo amin’ny teniko koa. efa nihaona. Tamin’izany fotoana izany tamin’ny taonako, ny afon’ny asany dia tena ra, tsy misy rà intsony, satria ny rà dia mora kokoa ny mampiakatra tosidra.
Telo volana taorian’ny nahazoany diplaoma tany amin’ny oniversite, X dia namoaka ny portfolio-ny tamin’ny masoivoho am-polony mitady fahafahana ho lasa mpanoratra kopia.
Sampan-draharaha sivy no tsy namaly, fa i X dia mbola mino fa eo am-pandinihana ny fangatahana. Soa ihany fa sambany ny masoivoho fahafolo niantso ny X.
Nilamina tsara ny tafatafa. Tamin’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana, dia nandray tanana mafy an’i X ilay talen’ny famoronana: “Manana fomba fijery tanora ianao. Tsy ampy anefa ny maha tanora anay amin’izao fotoana izao. Mila olona be taona izahay, izay afaka manomboka miasa avy hatrany. Mitadiava toerana mety aminao, ary miverena afaka herintaona.”
Indray andro monja dia niverina i X. Amin’ity indray mitoraka ity amin’ny X dia tsy mitovy amin’ny “Omaly X” amin’ny volo ka hatramin’ny akanjo, antitra toy ny antitra. Nandefa SMS tamin’ny mpandray vahiny i X hoe: “Mba lazao amin’ny talen’ny famoronana fa misy antitra te hihaona”. Soa ihany fa fanindroany i X no voafidy.
Dokam-barotra – copywriting, fa tsy fanoratana votoaty
Betsaka ny fandefasana asa apetraka ao amin’ny forums, ny vondrona Marketing dia milaza mazava tsara fa maka copywriters izy ireo, fa ny tena izy dia ny fanoratana votoaty, ny mampalahelo kokoa, ny votoaty-SEO.
READ Cách đăng ký làm người mẫu ảnh nhanh chóng và đơn giản | Anybook.vn
Manorata lahatsoratra bilaogy, teny 1000 na mihoatra na manorata lahatsoratra facebook, izany no fanoratana votoaty
Manorata lohateny fohy vitsivitsy, ampidiro ny fametrahana ny vokatra amin’ny marika iray, marika iray, antsoina hoe copywriter.
Votoaty ho an’ny varotra (votoaty facebook) na hanatsarana ny laharan’ny tranokala hahazoana toerana tsara amin’ny milina fikarohana (votoaty SEO) voampanga amin’ny lahatsoratra, lahatsoratra an’aliny, pejy maromaro lava.
Ny mpanao kopia indraindray dia mamoaka lahatsoratra iray na roa mandritra ny volana vitsivitsy, mitentina arivo dolara maromaro ho an’ireo andalana fohy ireo.
Izany no fahasamihafana fototra amin’ny asa copywriter – hevitra famoronana copywriting.
Ao amin’ny boky Manaova namana amin’ny sary, manaova fitiavana amin’ny teny, ny mpanoratra ny Pencil dia mamaly amim-pahakingana amin’ny alalan’ny toko boky. fanontaniana sy valiny.
Inona no maha samy hafa ny copywriting sy ny fanoratana, tompoko?
Misy fahasamihafana lehibe roa. Voalohany, ny fanoratana doka dia tsy maintsy “advertising”, ary ny fanoratana dia tsy maintsy “voasoratra”.
Ny doka dia “Taratasy Fitiavana Sponsored” feno hafatra momba ny varotra. Ny fanoratana ho an’izao tontolo izao dia toa manoratra ho an’ny olona iray fotsiny. Eritrereto ny marika ho namanao, ary ny mpanjifa ho toy ny olon-tiana ho avy. Ary avy eo dia manoratra amin’ny olon-tianao ho avy (fa tsy fantatrao hoe iza izy) mba hiaraka aminy mandritra ny taona sy volana, ka izy (ankehitriny na ho mandrakizay) ihany no tia anao.
Indrisy anefa fa tena “vaovao sy antitra” io olona io, ny tsy fivadihana aminao dia tsy mitovy amin’ny tsy fivadihan’ny alika.
Tsy miantoka ny tsy fivadihana ny dokam-barotra famoronana. Tsy miantoka ny tsy fivadihana koa ny firohondrohon’ny dokambarotra famoronana. Rehefa tsy manana safidy maro io olona io, na fampakaram-bady na fandevenana, vao ho ambony ny tsy fivadihana.
Amin’ny fanoratana dia mitantara zavatra niainanao isan’andro ianao, na mamerina ny eritreritrao.
Ary faharoa, ny copywriting dia fitambarana, ny fanoratana dia tsirairay. Amin’ny dokam-barotra dia tsy misy fototra ho an’ny herim-po. Ny dokam-barotra dia tapa-kazo marobe amin’ny tany iray santimetatra.
Inona no torohevitra omenao ho an’ireo tanora te hanandrana ny tanany amin’ny dokam-barotra?
Toro-hevitra tsy manana aho, fa raha soso-kevitra dia izao: mianatra momba ny andro indostrialy pôrnôgrafia
Voamarikao ve fa misy zavatra itovizana ny dokam-barotra sy ny pôrnôgrafia?
Eny. Mahamenatra ny mametraka ny “creativity” sy ny “vary mipetaka” ao anaty lovia iray. Na izany aza, tsy mbola nanana traikefa manankarena hafa ivelan’ireo faritra roa ireo aho, ka nahatsikaritra aho fa misy fitoviana hafahafa eo amin’ny dokam-barotra sy ny pôrnôgrafia!
Voalohany, indostria tsy tian’ny rehetra atao izany. MIFIDY NY TOETRA fa tsy ny maha-olona.
Faharoa, tsy mila diplaoma. Mila mampiseho ny fahaiza-manao mety ianao.
Fahatelo, mitaky fahaiza-mamorona avo dia avo. Mitovy ihany izany, fa mila manavao ny tenanao ianao, tsy maintsy “midera” zavatra samihafa foana mba tsy ho leo ny olon-tianao.
Fahefatra, FITSIPIANA kokoa noho ny aingam-panahy ny dokam-barotra. Rehefa mandre “action” ianao dia tsy maintsy mihetsika. Tsy misy olona afaka miandry anao hientanentana alohan’ny hihamafy. Mahereza fotsiny aloha, mahazo aingam-panahy.
READ Ngành Giáo Viên Mầm Non - Những Cơ Hội Việc Làm Của Ngành Giáo Viên Mầm Non - Đề án 2020 | Anybook.vn
Fahadimy, raha tsy manana namana tsara ianao dia manao ny asa hahavitany azy.
Fahenina, manana fahafahana hifanerasera amin’ny mpiara-miasa maro ianao. Indraindray amin’ny fotoana iray ihany.
Fahafito, misy fandrisihana hanampy anao hiezaka hatrany.
Fahavalo, tena mifaninana. Rehefa mihetsika eto ianao dia misy filaharana ery vonona handoa hetra tsy voaloa.
Fahasivy, tsy mora sy mora araka ny fiheveran’ny maro azy. Mandevona ny vatanao sy ny sainao isa-minitra izany. Afangaronao foana eo anelanelan’ny tsipìka roa “eo amin’ny vala, eo ambanin’ny tantanana”. Eo ambony ny mpitantana, mangataka ny hamorona na dia eo aza ny fitsipika rehetra. Ity ambany ity ny mpanjifa, tsy misy fitsipika ny fangatahana fanitsiana. Mahasorena mahasorena. Teraka mampalahelo. Aretina mampalahelo. Aretina ara-batana
Inona no mahasamihafa azy? Eny, manana fomba selfie ny indostrian’ny pôrnôgrafia. Tsy misy doka, antoko mpihira, Multiplayer.
Fisaraham-bazana tsy mitombina amin’ny asa fanaovana dokambarotra
Ny tontolon’ny masoivoho dia mety tsy mety ho an’ny sasany, noho ny antony iraisana:
Ny fofon’ny vola: Tsy manankarena velively ny dokam-barotra, raha ny hoe manankarena dia manao akanjo fotsy, manao akanjo tsotra, manana trano avo. Tsy hanan-karena, hanan-karena, fa hanan-karena amin’ny namana. Ny voan’ny fifandraisana dia hamoa indraindray.
Ny fofon’ny tandroka: Na ny papango aza dia mahalana ianao no manana fahalalahana tanteraka hanao izay tianao. Ny papango dia manidina, manidina avo, manidina avo kokoa, fa amin’ny farany dia tsy maintsy mikitika ny tany ihany. Satria voafatotry ny tady ny papango. Ny tady hita maso no fetra fiarovana amin’ny indostria. Ny tady tsy hita maso no fetran’ny famoronana anao.
Maimbo may: mirehitra toy ny mololo koa ny dokam-barotra, fa tsy manitra toy ny hena foana. Very liana amin’ny tontolo safari ianao. Maniry toerana mangina ianao, misy volana manitra eo ambonin’ny lohanao, tany tsara eo ambanin’ny tongotrao. Mandehana fotsiny. Raha tsy mitondra fifaliana ny asa, dia sarotra aminao ny manao izay fara heriny.
Farany, tsy nanadino ny nanakatona fehezanteny ny mpanoratra Pensil: Copywriting, asa safidy. Mety ho mpanoratra kopia ianao na talen’ny zavakanto, fa raha handeha lavitra, azo antoka fa tsy maintsy safidy izany. Raha te ho lasa milionera ianao dia tokony ho mpivarotra. Varotra sambo, volom-borona na zavatra hafa. Raha te ho lasa milionera hevitra ianao dia asa lehibe ny dokam-barotra. Ny vola no mividy fahasambarana. Mividy fahasambarana koa ny hevitra.
Tsy maintsy ho faly adaladala ianao rehefa nahita hevitra mendrika ny vola. Tongasoa eto amin’ny tontolon’ny dokam-barotra. Raha tsy izao dia rahoviana?
Any amin’ny faran’ny boky no misy ny fiaiken-keloka amin’ny fony amin’ireo izay mikasa ny hanomboka asa amin’ny dokam-barotra. Ny fo mahatsikaiky, ny maha-olona ary tsy mitovy amin’ny hafa, ny fitiavana sy ny ra dia ho tafavoaka velona amin’ny asa. Na dia “mihomehy amin’ny ranomaso aza” dia mbola mamorona vokatra famoronana mandritra ny androm-piainany ireo olona ireo.
Mba hamaranana ny famerenana ny boky eo amin’ny latabatry ny fandrian’ny olona manao dokam-barotra, dia tiako ny hampahafantatra ny mpamaky ny rohy facebook an’ilay boky:
Afaka mitsidika ity fanpage ity ny mpamaky mba “hiaraka hihomehy, hiara-hitomany”, “hatory” miaraka amin’ny olona ao amin’ny indostrian’ny dokam-barotra.
Hoang Lao Hac aho, teknisianina votoaty ao amin’ny reviewsach.net. Tia boky mpitsikilo amin’ny karazany rehetra. Tia piano, malefaka sy mampihetsi-po.
Raha tianao ny lahatsoratro dia aza misalasala mizara izany amin’ny facebook na fantsona sosialy sasany mba hovakian’ny namanao koa!
Na azonao atao ny manindry ity mombamomba ahy facebook ity raha haneho hevitra.
Mahazo aina tanteraka! Iza no mahalala fa mety ho mpinamana indray isika!
Previous: VCU là trường gì? Tiềm năng công việc rộng mở khi theo học VCU | Anybook.vn
Next: 10 quyển sách mà các nhà quản lý giỏi sẽ không bao giờ bỏ qua | Anybook.vn